Control Tayada - soosaaray JL Co., Ltd
1) Control Tayada on Waxyaabaha.
Si abtain waxyaabaha dabiiciga ah, tayada wanaagsan yimaado 70% wax wanaagsan iyo 30% processing, sidaas sanad kasta waxaan uga sooco, dadaalka badan in la helo ilaha iyo goobta soo saara ee wax ceeriin in tayo fiican leh, Waxaan leenahay personels xirfadeed si ay u ururiyaan wax cayriin.
2) Control Tayada on Warehouse
condiction Kaydinta Good waa mid aad u muhiim ah in la sii qayb firfircoon oo wax xumu, Our bakhaarka oo keliya ma ilaalin kartaa wax cayriin si aad u hesho qoyan, ama caariyaysi, laakiin sidoo kale difaac fiican oo ah alaabta dhammeeyey.
3) Control Tayada on Facility
Facility waa mid aad u muhiim ah in Wehliyaha dhalidda, Waxaan lacag bixisid si aad casriyeeyo xarumaha ee our warshad fiiro dheeraad ah, xarunta wanaagsan u yarayn karaa kharashka soo saarka iyo korodho tartan.
4) Control Tayada on Warbixiinta Ranjiga
Waxaan diiradda saaray exract warshadda for Feed & Veterinary Drug, ka FAMI-QS iyo dalabaadka Tayada codsan tayada our on Warbixiinta isticmaalo hadhay ee dareeraha iyo dareeraha. Heerka macdanaha culus oo ka hadhay methanl ku xiran tahay waxyaabo badan oo ku saabsan tayada qase soosaaray, sida Hg (mercury, quilksilver) ee Warbixiinta Macleaya Cordata waa ka dareeraha ah ee sulfuric acid, methanol ee St. John 'Wort Warbixiinta waa ka ethanol ah .Waxaa dareeraha Warbixiinta tayada wanaagsan u yarayn karaa halista ah ee aad u badan ee biraha culus oo heer methanol.
sidoo kale codsi beeraha Organic dareeraha (ethanol) ma aha sythentic, annagu waxaan uun nahay ethanol ka hadhuudh si cajiib leh u isticmaalaan la siibtey free.
5) Control on saaridda Procressing Tayada
Ka dib markii wax soo saarka sanadkii badan iyo cilmi baarista on technology, Waxaan leenahay shaxda socodka habka soo saaridda deggan oo baaluq alaabooyinka kasta, waxaan sii tayada deggan.
6) Control Tayada on Anayslis
Our QC muunad doonaa Dufcaddii kasta wax kasta oo ay tahay saamiga ama Dufcaddii iyo tiro samayn falanqaynta joogtada ah ka dib markii wax soo saarka, ay dhacdo in kaydinta ka badan 1 bil, falanqaynta labaad in lagu sameeyo ka hor inta shixnad. Dhammaan heerarka ayaa laga NIFDC (Institues Qaranka ee Cuntada iyo Control Drug) ama li'idiisa.
7) Control Tayada liiska xirxirida.
Waxaan anfaco qalabka kala duwan xirxirida alaabooyinka kala duwan ee gaarka u ah oo kala duwan si ay u sii tayada deggan. Alum Bag, Vaccumm xirxirida, caaga Drum. Glass Dhalo. oo dhan amarada ganacsiga, waannu wada yeeli doonnaa xirxirida sariirtaada ee dhowrayay nabadda ee gaadiidka alaabta.